Ahoana ny fiankinan'ny fahombiazanao amin'ny marketing B2B amin'ny orinasa manontolo | Martech Zone
Inona ny Resipeo ho an'ny fahombiazan'ny varotra nomerika B2B?
The 2015 Inona no mandeha aiza ny tatitra dia misy dikany ny tontolon'ny nomerika multichannel ankehitriny. Miara-miasa amin'ny Ny Fikambanana Marketing ary Fikarohana faribolana, Omobono nanadihady ireo tompon'andraikitra ambony 331, any Etazonia sy UK, manerana ny Marketing, Sales, Customer Service, HR ary ny fifandraisana anatiny mba hahatakarana bebe kokoa ny tanjon'izy ireo, ny tetibola, ny hetsika ary ny paikady / fanamby.
Ireto ny fangaro omen'i Onobono an'izany fahombiazana izany:
Ny filan'ny marika fananganana dia izao andraikitry ny tsirairay.
Ny departemanta rehetra dia mampiasa fantsona nomerika efa niorina.
Mivarotra hatrany ny varotra fantsona vaovao toy ny sosialy, horonan-tsary ary bilaogy (saingy tsy azonao antoka ny fahombiazany).
A paikady nomerika ofisialy misy fiatraikany lehibe.
An fomba fiasa tafiditra dia omena amin'ny alalàn'ny fitarihana eo afovoany, ny tsirairay mahatakatra ny maha-zava-dehibe, ny fanohanan'ny fikambanana, ny finiavana hiara-hiasa sy ny fampifanarahana ny tanjona sy ny laharam-pahamehana.
Ny famaranana ny tatitra dia mety somary mampiady hevitra… mametraka ny marketing ho tompon'andraikitra amin'ny iray manontolo Paikady nomerika B2B. Raha ny tenako manokana dia heveriko fa mety ho tafahoatra loatra izany. Ireo mpivarotra dia mazàna mampino amin'ny famolavolana ny fahitana, saingy tena mitaky ny varotra sy ny serivisy izany mba hitondrana an-trano fampiharana feno an'io paikady io.
Ny orinasa sasany dia mandrindra amin'ny alàlan'ny foibe Lehiben'ny mpandrindra vola (CRO) hanana andraikitra tompon'andraikitra amin'ny fihazonana, ny fahazoana ary ny fampitomboana ny lanja amin'ny fifandraisan'ny mpanjifa. Mieritreritra aho fa hanosika an'io paikady io alohan'ny hanipazako azy rehetra amin'ny marketing.
Tags: b2b marketingfahombiazana amin'ny marketing b2bfikarohana faribolanaSerivisy ho an'ny mpanjifafahombiazana amin'ny marketing nomerikaloharano mpiasafifandraisana anatinyomobonony fiarahamonina marketing